ကိန္နရီကျွန်းများအပိုင်း2DOWNLOAD FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 974 ကို MB
downloads ရယူရန္ 82 216
ဒုတိယအပိုင်း အဆိုပါကိန္နရီကျွန်းများ, စပိန်မှပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်းစုများ၏ကျိကျိတက်ဓာတ်ပုံအစစ်အမှန်ရှုခင်း၏။
ဒီရှုခင်း၏ပထမအစိတ်အပိုင်းကိုရယူနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအရ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ဒါဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်အပိုင်း 1 မတိုင်မီအပိုင်း2တပ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်.
ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်ပါလေဆိပ်ပါဝင်ပါသည်: GCFV : Fuerteventura လေဆိပ်, GCLB : အယ်လ် Berriel လေဆိပ် GCLP : Gran Canaria လေဆိပ်, GCRR : Lanzarote လေဆိပ်။
သတိပြုရန်အလွန်ကြီးမားဖိုင် 971 မိုထိုသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဥပမာ (အဘယ်သူမျှမအံ့သြဖွယ်ရှိသည်ဖို့ဖမ်းဆီး၏အချက်မှာခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ကို download accelerator software ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြု FlashGet).